I-Qgis-Umzekelo weendlela ezilungileyo kwimodeli ye-OpenSource -Geofumadas
I-Qgis-Umzekelo weendlela ezilungileyo kwimodeli ye-OpenSource
Agasti, 2015 qgis
Njalo xa sihlala phantsi phambi kwenkampani okanye isikhungo esinqwenela ukuzalisekisa iqonga lokulawula ummandla, ejwayele ukuva amazwi amaninzi amaninzi ngokuphathelele imizekelo ye-OpenSource, lo mbuzo uvela ngeenguqu ezincinane.
Ngubani ophendula iQGIS?
Kubonakala ngathi sinoxanduva kwaye siyinto eqhelekileyo, ukuba umenzi wesigqibo ufuna ukuxhasa isenzo esiza kuphicothwa ngokukhawuleza okanye emva koko -ngekhonkco okanye ngokukhwela-.
Kwenzeka ntoni ukuba iiModeli zeOpenSource kunzima ukuzithethelela, ngokuyinxenye kuba kwiimeko ezininzi, amagosa akwizikhundla zolawulo azama ukuqonda ukuba zeziphi iinkcukacha-zeeteknoloji ezingenakho nokuchaza. Kodwa nangenxa yokuba izenzo zabadlali ezivela kwicandelo labucala zizama ukubangela ukudideka, ukubonisa ukuba isoftware yasimahla ayisiyongcali, ayinayo inkxaso okanye inekamva eliqinisekileyo.
Zombini ukuzithemba okungaboniyo kunye nolunya kufuneka ziqwalaselwe, kuthathelwa ingqalelo ukuba uninzi lwamaphulo emithombo evulekileyo awile ecaleni kwendlela. Kananjalo kuba isicwangciso sokufudukela kwindawo evulekileyo akufuneki sithengiswe njengokuncitshiswa okupheleleyo kweendleko kodwa njengethuba lokunyusa ulwazi, olufuna ukuncedisana noqeqesho kunye nokwenza izinto ngendlela echanekileyo, ukunyaniseka, kube nzima ngakumbi ukuthengisa ... .
Ityala leQgis yimodeli enomdla, ekunokubhalwa kuyo iincwadi ngolunye usuku. Ayisiyo eyokuqala, kwaye ayisiyiyo kuphela; Amatyala aphumeleleyo anje ngeWordPress, iPostGIS, iWikipedia kunye neOpenStreetMap ibonisa ukufana phakathi kokuzincama kunye nethuba leshishini elisebenzisa ithuba lokusebenzisana emva kolwazi lwentando yesininzi. Kwaye kukuba nzulu, ayenzelwanga ukuthintela amathuba kwicandelo labucala okanye ukuthatha isimo sengqondo ngokuchasene neempawu ezihloniphekileyo ezenze imarike; Endaweni yoko, imalunga nokuthintela ukubakho kwezinto ezintsha kunye nophuhliso lomntu ngezixhobo zetekhnoloji, ngendlela enoxanduva.
Kodwa ekugqibeleni, ezona ndlela zisetyenziswayo zeProjekthi ye-OpenSource kufuneka zilinganise phakathi koyilo olusebenzayo, uyilo, umfanekiso wequmrhu, ulawulo loluntu kwaye, okubaluleke ngakumbi, uzinzo; Igama elingahambelani apha nethoni efanayo ebesiyisebenzisa kwicandelo leNtsebenziswano. Ndiyalithanda igama elingcono Inzuzo ehlangeneyo.
Abo baxhasa iQgis
Kuyathakazelisa ukuba inguqu yeQgis eya kukhutshwa ngenyanga kaMatshi ye-2016, inezi ziko zilandelayo:
I-Asia Air Survey, eJapane. Ukususela kwi-2012 eli liziko elinomnikelo omkhulu kwiprojekthi yeQgis; Kwimeko yeMpuma Ekude, inoxanduva lokukhuthaza ukuphuhliswa kobuchwepheshe bekhwalithi eliphezulu kwi-geospatial sector.
I-Sourcepole AG, eSwitzerland
Umbuso waseVerarlberg, eAustria
Ofisi yoLuntu yeMisebenzi, e-Ireland
IYunivesithi yeSayensi neThekhnoloji, ePoland
Aba baxhasi basibonisa ulwabelo ebenalo kwimeko yaseYurophu, kunye nendibaniselwano phakathi kwamacandelo kaRhulumente, aBucala nawamafundo. Bona ukuba ayingawo amazwe azizityebi ngokwezoqoqosho, kodwa inqanaba lobuchwephesha beenkqubo kwezi zinto zixhomekeke ekuxhaseni iQgis kufuneka zihlonitshwe, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokukwazi ukuthethelela kutyalo-mali lwabo, inkxaso yeqonga loluntu lonke lwehlabathi.
Kunika umdla ukubona ukuba kula mazwe akukho ntlupheko igqithileyo kwaye akukho sidingo sokwehlisa iindleko zesoftware. Ke i-OpenSource yenye yeendlela zokuyila kunye nokuphucula ulwazi lokusebenzisana.
GKG Kassel, eJamani
ADLARES GmbH, eJamani
GFI - Gesellschaft für Information Technology, eJamani
ULutra Consulting, eUnited Kingdom
Royal Borough of Windsor kunye neMaidenhead, eUnited Kingdom
Trage Wegen vzw, eBelgium
Njengoko kunokubonwa kolu luhlu, sithetha ngazo zombini iinkampani eziqinileyo kunye noosomashishini abasandula ukwenziwa. Nantsi ikhredithi yethu kwiMephu yeGIS, inkampani yokuqala kwimeko yokuthetha iSpanish ukuze ubhalisele le nkxaso.
Kubalulekile ukuba uqonde ukuba okoko nje kukho iinkampani zabucala ezixhasa isoftware yasimahla, siya kuba neenkampani ezinzulu ezibonelela ngenkxaso, asizukufumana kuphela abaphuhlisi abazimeleyo ababambelele kwiigaraji, ikhowudi yokubhala kunye nokuxuba ibhiya neadrenaline. Endaweni yoko, iingcali eziqeshwe ziinkampani phantsi kweeprojekthi ezithile, ngeenjongo, imigangatho kunye nokuqinisekiswa komgangatho.
Kakade, i-adrenaline kunye nephunga lamagundane e-garage kuyimfuneko, ukunika ukunambitheka kwezinto ezintsha kwiiprojekthi ezibaluleke kakhulu, ukuba ngamava, siyazi -Casi- kufuneka bazalwe apho.
Ukuhlaziywa kwabaThengi, eU.SA
Chartwell Consultants Ltd, eCanada
Gaia3D, eMzantsi Korea
Uluhlu oludlulileyo ezimbini zisibonisa ukuba intsimi isenyulu ekufuneni abaxhasi. Kodwa ukuba unamaziko amane aseJamani, isiFrentshi esinye, isiTaliyane kunye nesiNgesi ezibini ... baqinisekile ukuba abayi phambili ukuze bangalahlekelwa ngamandla. UMbindi Mpuma kunye ne-United States zihlala zifuna ukuxhaphazwa, apho nge-tweezers kunokwenzeka ukufumana umyolelo, kunye namanye amazwe aseLatin America apho iprojekthi ye-gvSIG ibonakalisile ukuba kunokwenzeka.
Isoftware ye-OpenSource ifuna ababonisi ababethelela isibhakabhaka, nokuba bangabokuzithandela okanye bahlawulwe. Oku, ukuze yonke imizamo ilungelelaniswe kwaye umthwalo ungaweli kumntu omnye okanye ababini abangenazo izinto ezininzi. Ukwenza oku, i-Qgis ineKomiti eLawulayo yeProjekthi eyenziwe ngala malungu alandelayo:
UGary Sherman (uMongameli)
UJürgen Fischer (umlawuli wezekisi)
I-Anita Graser (Uyilo kunye noNxibelelwano lomsebenzisi)
URichard Duivenvoorde (uMphathi weZibonelelo)
UMarco Hugentobler (uMlawuli weMigaqo)
UTim Sutton (Uvavanyo lweMigangatho kunye noqinisekiso)
Paolo Cavallini (ezeMali)
UOtto Dassau (Uxwebhu)
Into enomdla kukuba ayingawo amagama angaqhelekanga xa sikhumbula i-hashtag #qgis kwi-Twitter okanye abasebenzisi abanamava kwiiforamu zenkxaso. Oku kubonisa indlela abazimisele ngayo kule projekthi, bajongane nesimbo sabo bakwi-Anglo-Saxon umxholo: ngaphandle kwekratshi kwinto abayaziyo, ngaphandle kokufuna ukugqama, ngamakhadi oshishino angenalo negama lokugqibela.
Ndiyabulela kweli qela leeokhestra, bafezekise inqanaba elimangalisayo lokuzithemba, elinomdla kulungelelwaniso; emva kwento endiyithethileyo nabasebenzisi abazibandakanye ngokuzithandela nangobungcali kwimisebenzi yokuphucula amava kunye namaqela. Kukwabalulekile ukufaka igalelo ekubeni obu bundlobongela nokulungiswa kweprojekthi yeQgis kutsha nje; kodwa inkwenkwe ikwazile ukwenza kakuhle. Ndizamile ngo Ngesihlandlo sokuqala esi sixhobo ngoJulayi 2009, ngeentsuku nje zokuzonwabisa ngenxa yokubhukuqwa kwabantu eHonduras. Namhlanje, ndibethwa luluvo lwabasebenzisi abathembekileyo, bezambathiswe imizimba ukoneliseka yinguqulelo yangoku kunye noxolo lwengqondo lokuba into oyifunayo ikuluhlu lweminqweno oluza kukonwabisa kungekudala.
Ngaphandle kwamathandabuzo ubomi besoftware yasimahla basekuhlaleni. Kukho abasebenzisi abagqithisileyo abakhuphela ukwakhiwa kwemihla ngemihla, ukubonisa nje ukuba intsha kangakanani, abo bayoyikayo abanethemba lokuba iya kuvavanywa ngokusesikweni, abo basebenzisana nabo abanikezela ngekhowudi yabo ngokutshintshela intsangu, abo banika ingcebiso simahla kunye nkqu nathi babhali abafunde ukwenza uphando lwenkqubo ngemizuzwana esingenayo isabhokhwe esandleni. Into ebangela umdla asikaze siyibone ngaphambili, ngazo zonke iindlela zonxibelelwano esinikwa leli hlabathi namhlanje.
Ndiyawuthanda lo mfanekiso ulandelayo, kuba sisiqinisekiso sokuqala se-cadastral endisibonileyo sisenziwa ligcisa likamasipala. Ukugqibelela njengoko kufanelekile. Kuphela ngeQgis. Ngaphandle kokuba simqeqeshe.
Ngokuqinisekileyo iinkqubo ezilungileyo zeProjekthi ye-Qgis kwimibandela yokuxhaswa ngokuzinzileyo, ukudibanisa okucwangcisiweyo, indlela yokugadla, ukukhula koluntu kunye nokusebenza kwamashishini kunokuba luncedo kwezinye iinjongo ngaphakathi kwimeko yokuBala.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Thelekisa umahluko phakathi kweQGIS kunye neArcGIS
Post Next iifayile shp Vula nge Google EarthOkulandelayo »